Cele News Archives - YomaLan
Home Cele News
ပြည်သူတွေအတွက် ဆေးရုံမှာရှိနေပေးမှာမို့ သူမအတွက် အိမ်မှာနေပေးပါဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ ဆရာဝန်မလေး ပိုးမမှီသာ
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ပိုးမမှီသာကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ချစ်စရာကောင်းသူလေးမို့ ယောက်ျားလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အချစ်တွေအပြင် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကပါ ချစ်ခင်နေကြသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပရိသတ်အချစ်တွေ အခိုင်အမာနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ရပ်တည်လျှောက်လှမ်းနေသလို ပညာရေးပိုင်းမှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပြီး အေးချမ်းပြီးချိုသာအပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့ မြင်သူတကာကို အမြင်အေးချမ်းစေသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ပရိသတ်အချစ်တော်လေး ပိုးမမှီသာကတော့ ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်း...
Covid 19 ကြိုတင်​ကာကွယ်​မှုအ​နေနဲ့ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​ Lock Down ချလိုက်​ပြီးဖြစ်​တဲ့ ​ဝေဠုကျော်
သရုပ်​​ဆောင်​ ​​ဝေဠုကျော်ဟာ အရေးကြီးစောင့်ကြည့်လူနာများကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အိမ်ပြန်ခွင့်မရှိတော့ တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လည်း lockdown ချလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်​။အခြားအလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ အရေးကြီးတွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝေဘာဂီ ​ဆေးရုံမှာ သူ ​နေ့​ရော ညပါ ရှိနေပါမယ်လို့လည်း အသိပေးထားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ ချစ်သူ ရေ💙💙💙 25 .3. 2020 COVID-19...
သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြည်ပမှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးက ပြည်ပက ပြန်လာတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ် နိုင်ငံသားအချင်းချင်း အပြစ်တင်ဝေဖန်ရဖို့ထက် လက်ကမ်းကြိုဆိုသင့်တယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးဟာ COVID-19 ရောဂါကြောင့် ပြည်ပက ပြန်လာကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့ သူမရဲ့ သဘောထားကို အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။ “ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဘယ်သူမဆို ကိုယ်နိုင်ငံကို ပြန်လာတာ...
Cele News yomalan - March 25, 2020 0
ချားလ်စ်မင်းသားဟာ မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာရှိနေပါတယ်။ ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုဝင် ချားလ်စ်မင်းသားထံမှာ COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရကြောင်း လန်ဒန်မြို့ရှိ တော်ဝင်စံအိမ် Clarence House က အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် Cornwall မြို့စား ချားလ်စ်မင်းသားဟာ မပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါလက္ခဏာရှိနေပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြောခွင့်ရအမျိုးသားက...